> Resource> Utility> Olee Chebe buut Sector si Viruses
Gịnị mere mkpa iji chebe buut oru si virus
Viruse bụ ụdị omume na-amị mbipụta nke onwe ya na spead ha ka ha ndị ọzọ omume ma ọ bụ faịlụ, na-emekarị ibibi ha. Buut oru virus bụ otu ihe ahụ dị ka thism, ma ọ na-elekwasị anya na-emetụta gị usoro, na-akwụsị ya si booting elu.
Ya mere, na-echebe buut oru si virus dị ezigbo mkpa ka gị na kọmputa. Otú ọ dị, buut oru bụ a usoro faịlụ na i nwere ike mfe ịkwaga, na-agụ ma ọ bụ ọbụna dezie ya. Mgbe ahụ, olee otú ị pụrụ isi chebe ya virus? Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ụzọ nke pụrụ ichebe gị usoro, gị buut oru na-echebe, na nke a bụ ụzọ na isiokwu a ga-agwa n'okpuru.
Olee otú iji chebe buut oru si virus
Tupu ị na-eme ihe ọ bụla, na-a usoro ichebe ngwá ọrụ: Wondershare 1-Click PC Care. Nke a na usoro nwere ike inyere iji chebe gị dum usoro na otu Pịa. N'agbanyeghị ihe ị na-eme ma ọ bụ ihe ụdị virus wakporo kọmputa gị, gị usoro, gụnyere buut oru ga-free nke mebiri.
Download free ikpe version nke Windows nchebe software n'okpuru ugbu a.
Step1. Otu Pịa iji chebe buut oru si Virus
Mgbe wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị na ị ga-esi isi interface dị ka ndị na. A zuru ezu Rolling ịlele akụkọ banyere niile kọmputa mbipụta ga-egosipụta ka ị mara gị PC ọmụma na ọnọdụ ahụ n'oge mbụ.
Step2. Otu click na-azụ a mma usoro
Pịa 'Idozi Ugbu a', mgbe ahụ, software ga rụchaa akụ elu-akpaghị aka. N'ezie, nke a omume na-echebe gị buut oru si virus site a mebere usoro. N'ihi ya, mgbe eji kọmputa gị, ị nwere ike họrọ azụ gị ezigbo mma usoro. Kedu? Ị na mkpa iji gbanyụọ usoro nchebe site eji bọtịnụ si "NA" na "Gbanyụọ". Ọ bụrụ na ị na-mere mkpa mgbanwe nke gị usoro ma na-achọ na-ya, ị nwere ike họrọ iji zọpụta ya na ezigbo usoro.
Ọzọkwa, a na omume nwekwara ike inyere iji chebe gị nchekwa na mgbe ahụ contenf site n'ịgụ ma ọ bụ edezi site ndị ọzọ. Gaa na "nchekwa Nchedo", ị ga-achọta ya.